२०० मेगापिक्सल भएको फोन मोटोरोला फ्रन्टियर आउँदै - eNepalPost
गुल्मीलाई ४ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख बजेट
मदानेको बाझकटेरी स्वास्थ्यचौकीमा विविध सामाग्री हस्तान्तरण
गुल्मीका ८ वटा स्थानीय तहमा पुरानै अनुहारको उम्मेदवारी
मदाने १ अग्लुङ्गमा प्रेम र शुशिलमा कस्ले बाजि मार्ला ?
पर्यटन मनोरञ्जन समाज अन्य खेलकुद़़ अर्थ सूचना-प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय
२०० मेगापिक्सल भएको फोन मोटोरोला फ्रन्टियर आउँदै
कठमाडौं, लामो समय टिक्ने ब्याट्री र सान्दार फिचरका साथमा मोटोरोलाले नयाँ स्माटफोन ल्याउने तयारी गरेको छ । यद्यपी, एक अनुमान अनुसार मोटोरोलाको फ्ल्यागसिप फ्रंटियर स्मार्टफोन यहि सालको जुलाईमा लन्च गरिने छ । २०० मेगापिक्सल क्यामरा भएको यो स्मार्टफोन र यस फोनका नयाँ फिचर्सको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
क्यामरा २०० एमपिको हुनेछ मोटोरोला फ्रन्टियर
चीनले अपकमिङ फ्रन्टियर स्मार्टफोनको लन्चिङको पुष्टि गरेको छ । हालै जारी गरिएको एक टिजरमा यो फोनलाई लिएर भनिएको छ कि यसमा इमेजको क्वालिटी तथा एक्सपेरियन्स बढाउनको लागी २०० मेगापिक्सेलको क्यामरा लगाइएको छ । यो बाहेक अन्य कुरा भने कम्पनीले जानकारी गराएको छैन । यो फोनमा लगाइएको २०० मेगापिक्सेलको क्यामराको सेन्सर सामसुङले बनाएको हो ।
यो फोनमा ८ के भिडियो रेर्कडिङ गर्न सकिने छ । यो फोनको अगाडीको क्यामरा भने ६० मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा हुने छ । जसले ३० फ्रेम प्रतिसेकेण्डमा ८ के क्वालिटिको भिडियो रेर्कड गर्न सक्नेछ । मोटोरोला फ्रन्टियरमा स्नयापड्रेगन ८ जेनेरेसन १ चिपसेट रहेको छ ।
यो फोनको व्याट्रिलाई लिएर केही दिनअघि मात्र समाचार लिक भएको थियिो । जस अनुसार मोटोरोला फ्रन्टियरमा ४५०० एमएएच को ब्याट्रि रहनेछ । यो ब्याट्रिले वायर र वायरलेस दुबै चार्जिङ सपोर्ट गर्नेछ । वायर्ड चार्जिङ १२५ वाटको स्पीडमा हुनेछ भने वायरलेस चार्जिङ ३० वाट र ५० वाटको विचमा हुनेछ ।
मोटोरोला फ्रन्टियर स्फेसिफिकेसन्स
इलेक्ट्रोनिक बजारमा अहिले चलेको हल्ला अनुसार यो फोनमा ६.६७ इनचको पोलेड स्क्रीन रहेकोछ , जसले १४४ एचजेड डिस्प्ले रिफ्रेस रेट दिनेछ । यस फोनको रयाम तथा स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने यो २ भेरियन्टमा उपलब्ध हुन सक्नेछ । पहिलोमा ८ जिबि रयामका साथमा १२८ जिबि इन्टरनल स्टोरेज रहनेछ भने अर्कोमा १२ जिबि रयामका साथमा २५६ जिबि इन्टरनल स्टोरेज रहनेछ ।
यस फोनको मूल्यलाई लिएर भने कुनै खुलासा गरिएको छैन, यद्यपी, मोटोरोला फ्रन्टियरको मूल्य नेपाली रुपैयामा ६४ हजार रुपैयाँ सम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
– दिनेश बास्तोला
आफ्नो प्रतिक्रिया साझा गर्नुहोस्
यी हुन विश्वकप फुटबल खेल्ने ३२ देश
विश्वकप फुटबल २०२२ को अफिसियल बल सार्वजनिक
प्रदेश १ सरकारको निती तथा कार्यक्रम
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निती तथा कार्यक्रम
२०२२ को ५ महिनामा १ लाख ९० हजार पर्यटक भित्रिए
घोषणा पत्र(२०७९) नेकपा एमाले मदाने गाउँ पालिका
विमानस्थलमा बम राखेको फोनले हंगामा
सुशासन र समृद्धि पहिलो प्राथमिकता : केसी
मदाने १ अग्लुङ्गमा प्रेम र शुशिलमा कस्ले बाजि मार्ला ? यस्तो छ आंकलन ?
अब युरोपेली मुलुक ‘टर्की’ को नाम ‘टर्किये’ हुने
काठमाडौंका मेयर बालेन साहले लिए शपथ
जय प्रकाश भुसाल
सूचना विभाग दर्ता नं.: ३३७२-२०७८/७९
का.म.न.पा - ३२, काठमाडाैं [email protected]
+9779869365175 +9779851148003 +9779847877261 +9779849692138
का.म.न.पा - ३२, काठमाडाैं
E Nepal Post © All rights reserved
eNepalPost © All rights reserved
अब युरोपेली मुलुक 'टर्की' को नाम 'टर्किये' हुने
नाम वा इमेल
मदानेको समृद्धिका लागि केसीको युवा जोश
गणेश अधिकारि र शान्ती श्रीको आवाजमा रहेकोगीत “हतियार” चर्चामा